Tetikasa momba ny rafitra fitarihan-drano izay mitondra fanantenana ho an'ny distrika iray manontolo | UNICEF Madagasikara
Tetikasa momba ny rafitra fitarihan-drano izay mitondra fanantenana ho an'ny distrika iray manontolo
Tetik’asa momba ny rafitra fitarihan-drano izay mitondra fanantenana ho an'ny distrika iray manontolo
Ny mponina ao Miary II, distrikan'i Toliary, any atsimo andrefan'ny Madagasikara, dia manantena ny hahazo voka-pambolena tsara amin'ity taona ity nohon’ny fametrahana ny lakandrano fanondrahana vaovao mirefy 6,8 km. Ity tatatra fitarihan-drano ity dia afaka manondraka tany mirefy 4 000 kilometatra toradroa anatina kaominina miisa 3 ao amin'ny distrikan'i Toliary.
"Drafitr’asa vaovao ity ka tokantrano 2 500 no hisitraka izany; ary antenainay fa hanana taom-pijinjana tsara izahay", hoy ny fanazavan'i Soamahalay Vana, filohan'ny fikambanan'ny mpampiasa ny lakandrano Fiherenana. Ny andraikiny amin’izany dia miantoka ny fitantanana ny rano sy ny faharetan'ny fotodrafitrasa izay mandrakotra tany voatondraka manana velarana 4 000 kilometatra toradroa.
Ny Kaominina ambanivohitra Miary II dia faritra tena namokatra fahiny. Kanefa tena nianjadian’ny vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro io toerana io, ka ny fisehon’izany dia tamin’ny alalàn’ny fiakaran’ny rano tafahoatra eo amin’ny renirano Fiherenena izay mivoaka ny lalany isaky ny 30 taona eo ho eo .
Ho fanampin'izany, ny reniranon'i Fiherenana dia miha-ritra hatrany isan-taona, ka ny tsy fahampian'ny rano dia tena tsapa tokoa ary mitarika ny faharefoana mahery vaika eo amin’ny mponina sy tsy fananana hery iatrehana ny fiantraikan’izany fiovaovan’ny toetr’andro izany. Io toe-javatra io dia vao miha-manamafy ny faharefoan’ny mponina eny an-toerana izay marihina fa efa tena marefo ara-toekarena ary tsy manana fotodrafitrasa enti-mamokatra sy tolotra fototra.
Nohon’ny fahatsapan’ny UNICEF sy ny PNUD io faharefoan'ny mponina io dia nanohana ara-bola ny fanarenana ilay tatatra fitarihan-drano izy ireo, tamin'ny alàlan'ny Tahirimbola iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Izany dia notanterahina miaraka tamin’ny fananganana tohodrano mba hahafahana manamafy ny tohi-belin’ny mponina rehefa tafaverina tamin’ny laoniny izany lakandrano fanondrahana izany.
Ny tanjon'io fandraisan’andraikitra io dia ho fanamafisana ny fahafahan'ny kaominina hanome antoka ara-pahasalama amin’ny fomba mahomby sy ao anatin’ny fotoana fohy, mba hampiroboroboana ny fahaiza-mitantana ny rano amin’ny fotoana izay ahitana rotsak’orana sy rano.
"Tena velom-panantenana izahay amin’ity fomba fampidiran-drano ity," araka ny fanazavan’i Soahamalay Vana.
Ny fidirana an-tsehatry ny orinasa iray dia nahazo ny fanohanan’ny UNICEF ary nandray anjara tamin’izany ihany koa ny mpiasam-panjakana eny an-toerana ary sasantsasany amin’ireo mpisehatra avy amin’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Miaraka amin’ny ekipan’ny Faritra Atsimo Andrefana, io orin’asa io dia miantoka ny fanadiovana ny lakandrano mirefy 6,8km.
“Mamelom-bolo ny mahita ny tanimbolinay voatondraka sy maitso. Ka na dia fady eto amin'ny havoana aza ny fambolem-bary, dia manandrana manovaova ireo karazana fambolena izahay," hoy i Vana teo am-pamaranana.
Hatramin'ny nanarenana ireo fotodrafitrasa teo amin’ny faritra izay voatondraka, dia afaka nanao fambolena maro isankarazany ireo tantsaha, ka anisan’izany ny ovy, lojy ary voatango. Namboly fary, landihazo ary artemesia ihany koa izy ireo.
Ny fiovaovan’ny toetrandro sy ny fiantraikany